चियावालीलाई भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा (भिडियो सहित) – News Nepali Dainik
चियावालीलाई भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १९, २०७७ समय: १६:०४:४४
उहाँ बिहान राती तीन बजेदेखि नै आफ्नो बच्चा पिठ्युँमा बोकी चिया बेच्नुहुँदो रहेछ। उहाँको माइतीघरतिर दिदीबहिनीहरू भएतापनी घरपटी चाहिँ खासै कोहि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले सुनधारामा सानोतिनो ठेक्कापट्टा गर्नुहुँदो रहेछ।
यद्यपि अहिले उहाँ श्रीमती र छोरी छोडेर पारीवारिक जिम्मेवारी विहीन भएर बस्नुभएको रहेछ। उहाँ घर पनि आउनुहुँदो रहेनछ। तर एक्कासि सामाजिक संजालबाट आफ्नो श्रीमतीको भाइरल समाचार आइसमेपछी उहाँले फोन चाहिँ गर्नुभएको थियो रे। यति धेरै दुख गरेर बसेको थाहा थिएन भन्नुभयो र रुँदै फोनमा कुराकानी गर्नुभएको रहेछ।
उहाँले भन्नुभयो कि,’ मेरो श्रीमानले अब घर फर्किन्छु त भन्नुभयो मलाई तर यस्तो दुखमा छोडेर जानुभएको छ अब म कसरी उहाँलाई स्वागत गरौं ? मलाई उहाँले यस्तो चोटमा छोडेर जानुभयो।मेरो त मनदेखी नै चित्त दुख्या छ। त्यो चोट अहिले तत्काल बिर्सिहाल्न नसकेको हुँदा अहिले नै हत्तपत्त स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ।’
बिशेषत: लकडाउनको कारणले उनीहरूबीच बाँच्ने उपाय खोजी गर्ने क्रममा टाढिने अवस्था आएको भएतापनी यसरी जिम्मेवारविहीन बन्नु हुँदैन थियो एउटा श्रीमान हुनुको नाताले।जतिसुकै दुख संघर्ष गरेतापनि साथमै रहेर गर्नुभएको भए मलाई यति चोट पर्दैनथियो। उनले बताइन् ।
Last Updated on: April 1st, 2021 at 4:04 pm